Xog: 10-Xaqiiqo Oo Ku Jirta Kulanka Chelsea Vs Man City , Fantastic Oo Dib Uu Eegaya Kulamadii Labada Dhinac | alcarabiya.com
Home » Cayaaraha » Xog: 10-Xaqiiqo Oo Ku Jirta Kulanka Chelsea Vs Man City , Fantastic Oo Dib Uu Eegaya Kulamadii Labada Dhinac
Xog: 10-Xaqiiqo Oo Ku Jirta Kulanka Chelsea Vs Man City , Fantastic Oo Dib Uu Eegaya Kulamadii Labada Dhinac
Indhaha dadka xiiseeya ciyaaraha ayaa maanta waxa ay ku sii jeedaan garoonka Chelsea ee galbeedka London halkaasi oo kulan xiiso leh uu ku dhex marayo kooxaha Chelsea iyo Man City .
Labada koox ayaa garoonka ku soo galaya iyaga oo xanbaarsan hal ku dhig ah ” guul mooye wax kale ma jiraan” gaar ahaan Chelsea oo kulankaan uu hogaaminayo tababaraha cusub kaasi oo doonaya in guulihii Chelsea dib u soo celiyo .
Sidaa oo kale City oo iyana u dagaalameysa in ay sii hayaan hogaanka horyaalka xili tababare mancini uu haysto cadaadis xoogan ka dib markii City si fudud ay u macsalaameyeen Champion-ka sanadkii labaad , sidaa darteed waxaa lagu wadaa in kulankaas noqdo mid faraha looga gubto , hadaba warbixintaan waxaan ku eegeynaa 10-xaqiiqo oo ku jirta kulanka caawa .
Xaqiiqda Koowaad: hadii Chelsea caawa badin waxa ay u tahay markii ugu horeysay oo aysan guul ku keenin sedex ciyaar oo isku ku xigta gurigooda tan iyo december sanadkii 2008-ka .
Xaqiiqda Labaad: Chelsea Waa ay dhaliyeen iyana shabaqooda goolal ayaa taabtay 7-dii ciyaar ee igu dambeysay ee horyaalka ingiriiska , sidoo kale laba jeer uun ayaa looga badiyay garoonkooda 15- ciyaartii ugu dambeysay .
Xaqiiqda Sedexaad: Haddii Chelsea ku fashilinto ciyaarta maanta waxa ay u noqoneysaa ciyaartii 5-aad ee isku xigta ee horyaalka ingiriiska oo Chelsea guul dareysto tan iyo december sanadkii hore 2010-kii .
Xaqiiqda Afaraad: Waa yar tahay in kulanka labada koox xiliyadii ugu dambeeeyay ka marnaato rigoorayaal iyadoo 5-rigoore la dhigay lixdii kulan ee ugu dambeysay ee horyaalka ingiriiska .	Xaqiiqdii Shanaad: City ma dhadhamin qaraarka guul darada 8-dii ciyaar ee ugu dambeysay ee ka dhacay banaanka garoonkooda 5- ka mid ahna waa ay guuleysteen .
Xaqiiqdii Lixaad: Weeraryahanka City Carlo Tevez waxa uu ka dhaliyay 6-gool lixdii ciyaar ee ugu dambeysay ee ay ku kulmeen horyaalka ingiriiska .
Xaqiiqda Todobaad: 10-kii kulanka ee ugu dambeysay ee ay kulmeen horyaalka ingiriiska waxa ay Chelsea guuleysteen 6-jeer halka 4-na City guuleysatay .
Xaqiiqda Sideedaad: Kulanka cawa waxa uu noqonayaa kulankii labad ee dhex mara labaad dhinac xili ciyaareedkaan iyadoo koobkii la oran jiray Carling Cup-ka ku kulmeen waxaana 3 -2 ku badisay Man City .
Xaqiiqda Sagaalaad: Labadii ciyaar ee xili ciyaareedki hore kulmeen ee horyaalka qeybta ka aha waxa ay ku dhamaatay 2-1 oo midba midka kale uga soo badiyeen.
Xaqiiqda tobanaad: guul daradii ugu horeysay ee City xili ciyaareedkii hore waxa ay kala kulmeen Chelsea , hadaab su`aaha taagan waxa ay tahay Chelsea Guul Daro Kale Dusha Ma Saari Doonaan Man City ?
Dhiibo Fikirkaada Ku Aadan Kulanka Caawa .
Alcarabiya Editor Team